ယောက်ျားလေးတွေပြောပြတဲ့ သူတို့ “မမတွေကို ပိုသဘောကျရတဲ့အကြောင်းရင်း…” – Trend.com.mm
Posted on February 20, 2019 by Noel
များသောအားဖြင့်စုံတွဲတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် မမနဲ့မောင်လေးစုံတွဲတွေများကြပါတယ်။လေ့လာချက်တွေအရလည်း ယောကျာ်းလေးတွေဟာ သူတို့ထက်
အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့မမတွေကို ညီမလေးတွေထက်ပိုပြီးသဘောကျကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာလို့မမတွေကို ပိုသဘောကျကြတာလဲ?ယောကျာ်းလေး
*မမတွေက သူတို့ဘာလိုချင်လဲ အတိအကျသိကြတယ်
မမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုကတော့ သူတို့ဖြစ်ချင်တာ၊သူတို့လုပ်ချင်တာကို တိတိကျကျသိကြတာပါပဲ။သူတို့ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာသိတယ်။သူတို့
အောင်မြင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိကြပါတယ်။ညီမလေးတွေက ကိုကိုတွေ၊မောင်လေးတွေနဲ့ဒရာမာခင်းနေချိန် မမတွေကတော့
မမတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း အများကြီးအာရုံစိုက်ပေးစရာမလိုလို့ သူတို့က မမတွေကိုသဘောကျကြပါတယ်။
မမတွေက အသက်အရွယ်အရပိုကြီးသလို ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကလည်း ပိုများပါတယ်။အချစ်ရေးမှာပဲကြည့်မလား၊စီးပွားရေးမှာပဲကြည့်မလား၊
ပညာရေးမှာပဲကြည့်မလား မမတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေနဲ့ ဘ၀ကို အေးအေးဆေးဆေးရင်ဆိုင်နေတာ
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် မမတွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ သူတို့အပေါ်လည်းကောင်းကောင်းပြုပြင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကို
ထောက်ပြနိုင်လိမ့်မယ်၊သူတို့ကိုပိုပြီးရင့်ကျက်စေလိမ့်မယ်လို့ ယောက်ျားလေးတွေက ထင်မြင်ယူဆပြီး မမတွေကိုပိုပြီးရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။
*မမတွေက ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီး အမှီအခိုကင်းတယ်
ညီမလေးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံစိုက်ခံရဖို့ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြိုးစားနေချိန် မမတွေကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ သူမတော်ကြောင်း၊သူမတတ်ကြောင်း
သက်သေပြစရာမလိုလောက်အောင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိစွာ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။မမတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း သူတို့အတွက်ဂရုစိုက်မှုသာ
ပေးနိုင်ရင် ဒါက အကောင်းဆုံးအကူအညီပေး၊အားဖြစ်ပေးတာပါပဲ။
*မမတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလည်း ပိုရင့်ကျက်မှုရှိတယ်
မမတွေက ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်ကာလအပိုင်းအခြားကိုဖြတ်သန်းလာရပြီးတဲ့အတွက် မောင်လေးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။မမတွေက အချိန်တိုင်းအတူရှိနေရမှ၊သူတို့ကို အမြဲသ၀န်တိုနေမှ၊သူတို့နဲ့ အမြဲစကားပြောပေးနေမှဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုး မဖန်တီးကြပါဘူး။ဒါကြောင့် မမတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် အမြဲတမ်းချုပ်ချယ်ခံနေရတာ၊ဟိုဟာမလုပ်ရ၊ဒီဟာမလုပ်ရနဲ့တားဆီးခံရတာမျိုးတွေ သိပ်မရှိနိုင်ပါဘူး။သူတို့က သူတို့ချစ်သူမောင်လေးတွေအတွက်တောင် ပိုပြီးအားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
*မမတွေက မိခင်တစ်ယောက်လိုပဲ ကြင်နာတတ်တယ်
တစ်ချို့သောယောက်ျားလေးတွေက တစ်ခါတစ်လေဆို ကလေးတွေထက်တောင်ပိုကလေးဆန်တတ်ကြပါတယ်။သူတို့က မမတွေဆီက ဂရုစိုက်မှုကိုခံယူချင်ကြပါတယ်။အားပေးမှုကို လိုချင်ကြပါတယ်။တစ်ခုခုဆို သူတို့ရှေ့ကနေ အမြဲရှိနေပေးတာမျိုး၊သူတို့ကို ဂရုတစိုက်အစားအသောက်လေးချက်ကျွေးတာမျိုး၊အ၀တ်အစားလေးသေချာရွေးချယ်ဝယ်ပေးတာမျိုးစတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ပိုပြီးအားကိုးစိတ်ဖြစ်ကာ ညီမလေးတွေထက်ပိုပြီးသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့က ဂရုစိုက်ပေးရမှာထက် သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပေးမယ့်သူကို ပိုပြီးရွေးချယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အချစ်မှာအသက်ငယ်တာ၊ကြီးတာရယ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။အသက်အရွယ်က စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တာ၊မရင့်ကျက်တာကိုလည်း မပြနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလိုအချက်တွေကြောင့် မမတွေက ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာ ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိကာ ပိုပြီးသဘောကျသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ယူတို့မှာရော ဒီလိုမမမျိုးရှိလား?
မြားသောအားဖွငျ့စုံတှဲတှကေိုကွညျ့လိုကျရငျ မမနဲ့မောငျလေးစုံတှဲတှမြေားကွပါတယျ။လလေ့ာခကျြတှအေရလညျး ယောကျြားလေးတှဟော သူတို့ထကျ
အသကျအရှယျကွီးတဲ့မမတှကေို ညီမလေးတှထေကျပိုပွီးသဘောကကြွတယျလို့သိရပါတယျ။ဘာလို့မမတှကေို ပိုသဘောကကြွတာလဲ?ယောကျြားလေး
*မမတှကေ သူတို့ဘာလိုခငျြလဲ အတိအကသြိကွတယျ
မမတှရေဲ့ဆှဲဆောငျမှုတဈခုကတော့ သူတို့ဖွဈခငျြတာ၊သူတို့လုပျခငျြတာကို တိတိကကြသြိကွတာပါပဲ။သူတို့ဘာလိုခငျြတယျဆိုတာသိတယျ။သူတို့
အောငျမွငျဖို့ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာသိကွပါတယျ။ညီမလေးတှကေ ကိုကိုတှေ၊မောငျလေးတှနေဲ့ဒရာမာခငျးနခြေိနျ မမတှကေတော့
မမတှနေဲ့ခဈြသူဖွဈတဲ့အခါမှာလညျး အမြားကွီးအာရုံစိုကျပေးစရာမလိုလို့ သူတို့က မမတှကေိုသဘောကကြွပါတယျ။
မမတှကေ အသကျအရှယျအရပိုကွီးသလို ဘဝအတှအေ့ကွုံတှကေလညျး ပိုမြားပါတယျ။အခဈြရေးမှာပဲကွညျ့မလား၊စီးပှားရေးမှာပဲကွညျ့မလား၊
ပညာရေးမှာပဲကွညျ့မလား မမတှကေိုလလေ့ာကွညျ့လိုကျရငျ သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးတှနေဲ့ ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေးရငျဆိုငျနတော
တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ဒါကွောငျ့ မမတှကေို ရှေးခယျြတဲ့အခါ သူတို့အပျေါလညျးကောငျးကောငျးပွုပွငျပေးနိုငျလိမျ့မယျ။သူတို့လိုအပျခကျြတှကေို
ထောကျပွနိုငျလိမျ့မယျ၊သူတို့ကိုပိုပွီးရငျ့ကကျြစလေိမျ့မယျလို့ ယောကျြားလေးတှကေ ထငျမွငျယူဆပွီး မမတှကေိုပိုပွီးရှေးခယျြတတျကွပါတယျ။
*မမတှကေ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိပွီး အမှီအခိုကငျးတယျ
ညီမလေးတှကေ ပတျဝနျးကငျြအာရုံစိုကျခံရဖို့ တဈခုပွီးတဈခုကွိုးစားနခြေိနျ မမတှကေတော့ ဘယျသူ့ကိုမှ သူမတျောကွောငျး၊သူမတတျကွောငျး
သကျသပွေစရာမလိုလောကျအောငျယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိစှာ ဘဝကိုဖွတျသနျးနပေါတယျ။မမတှနေဲ့ခဈြသူဖွဈတဲ့အခါမှာလညျး သူတို့အတှကျဂရုစိုကျမှုသာ
ပေးနိုငျရငျ ဒါက အကောငျးဆုံးအကူအညီပေး၊အားဖွဈပေးတာပါပဲ။
*မမတှကေ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအရလညျး ပိုရငျ့ကကျြမှုရှိတယျ
မမတှကေ ငယျရှယျတဲ့အသကျကာလအပိုငျးအခွားကိုဖွတျသနျးလာရပွီးတဲ့အတှကျ မောငျလေးတှရေဲ့ခံစားခကျြကို ဘယျလိုကိုငျတှယျရမလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိကွပါတယျ။မမတှကေ အခြိနျတိုငျးအတူရှိနရေမှ၊သူတို့ကို အမွဲသဝနျတိုနမှေ၊သူတို့နဲ့ အမွဲစကားပွောပေးနမှေဆိုတဲ့အခွအေနမြေိုး မဖနျတီးကွပါဘူး။ဒါကွောငျ့ မမတှနေဲ့ခဈြသူဖွဈရငျ အမွဲတမျးခြုပျခယျြခံနရေတာ၊ဟိုဟာမလုပျရ၊ဒီဟာမလုပျရနဲ့တားဆီးခံရတာမြိုးတှေ သိပျမရှိနိုငျပါဘူး။သူတို့က သူတို့ခဈြသူမောငျလေးတှအေတှကျတောငျ ပိုပွီးအားဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
*မမတှကေ မိခငျတဈယောကျလိုပဲ ကွငျနာတတျတယျ
တဈခြို့သောယောကျြားလေးတှကေ တဈခါတဈလဆေို ကလေးတှထေကျတောငျပိုကလေးဆနျတတျကွပါတယျ။သူတို့က မမတှဆေီက ဂရုစိုကျမှုကိုခံယူခငျြကွပါတယျ။အားပေးမှုကို လိုခငျြကွပါတယျ။တဈခုခုဆို သူတို့ရှကေ့နေ အမွဲရှိနပေေးတာမြိုး၊သူတို့ကို ဂရုတစိုကျအစားအသောကျလေးခကျြကြှေးတာမြိုး၊အဝတျအစားလေးသခြောရှေးခယျြဝယျပေးတာမြိုးစတဲ့အပွုအမူတှကွေောငျ့ပိုပွီးအားကိုးစိတျဖွဈကာ ညီမလေးတှထေကျပိုပွီးသဘောကတြတျကွပါတယျ။ပွောရမယျဆိုရငျတော့ သူတို့က ဂရုစိုကျပေးရမှာထကျ သူတို့ကိုဂရုစိုကျပေးမယျ့သူကို ပိုပွီးရှေးခယျြကွတာဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ အခဈြမှာအသကျငယျတာ၊ကွီးတာရယျနဲ့တော့ မဆိုငျပါဘူး။အသကျအရှယျက စိတျဓာတျရငျ့ကကျြတာ၊မရငျ့ကကျြတာကိုလညျး မပွနိုငျပါဘူး။ဒါပမေဲ့လညျး ဒီလိုအခကျြတှကွေောငျ့ မမတှကေ ယောကျြားလေးတှရေဲ့မကျြစိထဲမှာ ပိုပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိကာ ပိုပွီးသဘောကသြှားခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
ကဲ ယူတို့မှာရော ဒီလိုမမမြိုးရှိလား?
မနက်ခင်းစောစောထခြင်းဟာ သင့်ကို ဘာတွေပြောင်းလဲသွားစေနိုင်လဲ